Samsung A4 Mono Multifunction Laser Printer (Network, Wireless, Wi-Fi Direct, Auto Document Feeder) | Buy online | SHOP.COM.MM
Samsung A4 Mono Multifunction Laser Printer (Network, Wireless, Wi-Fi Direct, Auto Document Feeder)
Mono Laser Multifuction Printer
A4,A5, Legal Max Paper size
It's very useful for me . That printer has so many functions and need small space. Read more Hide
ဒီအစုံသုံးပရင်တာကအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ တစ်စက်တည်းမှာအကုန်သုံးလို့ရတော့ နေရာစားသက်သာသွားပါတယ်။ Read more Hide
ရုံးသုံးကျောင်းသုံးအတွက်အထူးသင့်တော်တဲ့ Samsung စက်လေးပါ။ ပရင့်ထုတ်တာလည်း အရမ်းမြန်သလို မိတ္တူကူးလည်း အရောင်စိုတယ်။ Read more Hide
Specifications of A4 Mono Multifunction Laser Printer (Network, Wireless, Wi-Fi Direct, Auto Document Feeder)